Isihluzi sefaucet Inkqubo yokuCoca
2002 iqala ibali lethu
Ubungcali bethu bokuyila inxalenye yeplastiki busithabathe kuhambo lokuhluza amanzi. Siqale i-R & D yeetekhnoloji yokuhluza amanzi kunye nabathengi baseMelika ababonelelwe ngeekhatriji kunye nezinto eziphambili ngobugcisa.
Ngo-2008 Indlela eya kwiTech Filter
Njengoko ishishini lokucoca amanzi lisanda, indawo yethu yafuduselwa kwindawo entsha, eTong'an, Xiamen, apho ikhoyo namhlanje.
I-2010 Ukunyuka kwiXesha
Imakethi yokuhluza amanzi e-China ikhule ngokumangalisayo, izala ukuphuculwa kweyunithi yeshishini lokucoca amanzi. Ngale thuba, i-Xiamen Filter Tech yeNkampani yeNkampani yeNkampani yasekwa ngokuzimeleyo.
Uhambo olu-Lean luka-2012 luqala
Ukufunda ngeNkqubo yeMveliso yeToyota (TPS) kusikhuthazile ukuba sithathe inyathelo kwaye siphucule umbutho wayo. Sifaka ngaphakathi ukuqonda kwayo kwe-TPS ngokusebenza kwenkqubo yethu yokusebenza, iNkqubo yeeMveliso zeMbaleki (i-RPS), ukuphucula ukusebenza ngokukuko.
Ngo-2015 Ukusukela uMgangatho
Utyala imali eyi-5 yezigidi, ubuGcisa bokucoca baqala ukwakha isigaba sokuqala seelebhu zokuvavanya ngaphakathi endlwini ukuphakamisa imigangatho yethu yokhathalelo lwamanzi okusela.
Ngo-2016 unyaka wozuko
Ngo-Matshi ngo-2016, umzi-mveliso wesibini wecartridge wokucoca ulwelo waqala ukusebenza;
Ngo-Epreli 2016, ngaphakathi kwindlu ilebhu yovavanyo lokucoca amanzi yasetyenziswa;
NgoDisemba ngo-2016, ubuGcisa bokucoca banikezela isihloko se "Enterprise High-tech Enterprise".
2017 Ukuhamba okutsha
Isihluzi seTekhnoloji iba yenye yeenkxaso ezizezabanini beQela leMbaleki.
2018 Ukufikelela kwiindawo eziphakamileyo
Ilabhoratri yokuvavanywa ngaphakathi kweTekhnoloji yokuHlunga yamkelwa yiNkonzo yesiZwe yokuQinisekiswa kweSizwe kuVavanyo lweConformity (CNAS).
Hlala unolwazi ngesihluzo samanzi sethu kwi-129t ...
Fumanisa ukuba kuqhubeka ntoni eThailand
Izinto ezisetyenziswa kuNyango lwaManzi, IsiCoci seCartridge sokuThinta amanzi, Inkqubo eQhelekileyo yeNdlu yokuBuyisa iOsmosis, Icebo lokucoca ulwelo lwasekhaya, Umcoci waManzi kwiNdlu iphela, Eyona ndlela ibuyileyo yokubuyisela umva kuOsmosis,